Omncinci uTom Morris: I-Biography ye-Pioneer yeGalofu
I-Bio yegalufa yokuqala yinto ebalulekileyo
UTom Morris Jr, u-Young Young uTom Morris, ngokuqinisekileyo wayeyi-"star star" egalafu, umdlali ogama lakhe lidlula ngaphaya komdlalo. Okubuhlungu kukuba, wafa eneminyaka engama-24 - kodwa kungekhona ngaphambi kokuba athole iBritish Open iixesha ezine.
Umhla wokuzalwa: Epreli 20, 1851
Indawo yokuzalwa: uSt. Andrews, eScotland
Umhla wokufa: Ngomhla wama-25, 1875
Isiteketiso: uTom Morris Jr wayebizwa ngokuba ngu "Tommy" ngexesha lakhe, kodwa uyaziwa namhlanje ngokuthi "uTom Young" uMarris (ukumahlula kuye uyise, owayengowomvelo, "U-Old Tom" uMorris).
• I-British Open: 1868, 1869, 1870, 1872
• Omdala uTom Morris emva kokufa kwendodana yakhe: "Abantu bathi ufile ngentliziyo ephukile; kodwa ukuba oko kwakunyanisekileyo, andingeke ndilapha."
• Ukubhalwa kwesikhumbuzo kwisikhumbuzo sikaMorris: "Wazisola kakhulu ngabahlobo abaninzi kunye nabo bonke abadlali begalufa, kathathu ngokulandelanayo wayinqoba ibhande le-Championship kwaye wayigcina ngaphandle komona, iimpawu zakhe ezinomdla zingabonakali ngaphantsi kweendlela zakhe zokugaluba."
Ngowe-1868, uMnumzana uTom Morris uzuze i-Open Championship kunye no- Old Tom Morris . Yona yedwa ixesha unyana kunye noyise bephelile 1-2.
Ngowe-1869 eBritish Open, uThans Tom Morris ufumene i-hole yangaphambili. Kwenzeke ngexesha lojikelezo lokuqala.
Ngo-2007, incwadi kaTommy iHloniphe: Ibali le-Old Tom Morris kunye no-Young Tom Morris, uBawo oQalayo weGalofu noNyana , nguKevin Cook, bawonga i-Herbert Warren Wind Book Award njengencwadi efanelekileyo yegolfu yonyaka. Ngo-2017, le ncwadi yajika yaba yi-movie yegalufu, ebizwa ngokuba yiTommy's Honor .
Intsha yaseTom Morris:
Ngaphambi kokuba kubekho iTiger Woods - ngaphambi kokuba kukho nawuphi na umdlali odumileyo kwimbali yegalufa, ngenxa yolu hlobo - kwakukho u-Young Tom Morris. Iprodigy yokufezekiswa okunjalo kangangokuthi yayingumlando ngexesha lakhe. Kwaye kwenziwa uMorris ukuba wayejongene nokudalwa kweClaret Jug , i-trophy ye-now-winner ye-Open Championship.
Kodwa ubomi bukaMorris bubufutshane kakhulu: Wafa ngokukrakra, ngomhla weKrisimesi, eneminyaka engama-24.
Ubaba kaMormis - uTom Morris Sr., u- Old Tom Morris - wayephumelele iiMidlalo eziVulekileyo ezine, ekugqibeleni ngo-1867, unyaka owodwa ngaphambi kokuqala kwesihloko sakhe se-British Open son.
Kodwa uMnumzana uTom Morris wayephumelele iikhomphambanti ngaphambi koko. Ukuphumelela kwakhe kokuqala okukhulu, ngokweHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeFame , kwakumdlalo wokubonisa umbukiso e-Perth eneminyaka eyi-13. Ngama-16, wafumana umcimbi omkhulu kwiCarnoustie.
Ukuqaliswa kweGolris kwigalufu kwafika kwi-Prestwick Golf Links, apho uyise wayenguye umgcini-magcini (eqinisweni, u-Old Tom wayebeke i-Prestwick yesibini). Xa wayeseneminyaka engama-13, uTom Tom washaya i-Old Tom emdlalweni okokuqala - uyise wayengumlawuli weBritish Open, okwenza kube yimpumelelo enkulu.
U-Young Tom wadlala kwi-Open Championship ngowokuqala ngo-1865, xa wayeseneminyaka eli-14 ubudala.
Xa ephumelele iBritish Open ngo-1868, wayeneminyaka eli-17 kuphela. U-Tom osemncinci waphinda waphinda wabuyela ngo-1869 no-1870. Ngaloo xesha, umnqobi we-tournament wanikezwa "ngebhola lokuphanga," ngokubizwa ngokuba yi-Challenge Belt. Imithetho yacacisa ukuba nabani na onqoba ibhinti iminyaka emithathu eqondileyo kufuneka bayigcine.
UMorris wenza oko kanye, kwaye ibhande yayinguye ngonaphakade.
Kodwa oko kwashiya abaququzeleli beentambo ngeengxaki: Babengenaso nto into yokuyifaka kumqhubi.
Kwakungekho ncintiswano ngo-1871 (ikakhulu ngenxa yokuba kwakungekho "trophy" ukuza kubonisa), kodwa ngo-1872 owaziwayo ngoku " uClaret Jug " wayekulungele, kwaye uMnumzana uTom Morris waphumelela ukuba le troph, kunyaka walo wokuqala.
Kwiminyaka emithathu kamva, uMorris wayedlala umdlalo wemboniso xa efumene igama lokuba umfazi wakhe nomntwana babulawa ngexesha lokubeletha. UMorris ngokwakhe wafa emva kweenyanga ezimbalwa, ngomhla weKrisimesi, ngo-1875, eneminyaka engama-24. Isizathu asiyaziwa, kodwa ngelo xesha abantu abaninzi babecala ngelinye intliziyo.
Umncinci uTom Morris wayephelile ngumntwana wakhe, u-Old Tom Morris, engaphezu kweminyaka engama-30.
Umsebenzi weKholeji weTiger Woods
URalph Guldahl: I-Bio ye-3-Time Major Winner
Abazali bakaTiger Woods: Ngubani oomama noTata?
Iigodlo zeefayile zeeNicknam: Iluhlu olukhulu
Ukuphakama kunye neLows of Cancer-Scorpio Love Match
20 Amazwi NgamaKristu aseShawn
Ama-Arabhu aseMelika e-United States: Ukuhlaliswa kwabantu
ImiSebenzi ephezulu yokuzibulala kwiiFilimu zeMfazwe
Izizathu ezi-15 zeNas yi-MC ephezulu kunazo zonke
Ubukhosi baseTiwanaku - Isixeko samandulo kunye noMbuso waseMerika eMzantsi Melika
ImiSebenzi ye-10 ephezulu yokuBhala kubalobi nabaHleli
UBbibi Bhani (1535 - 1598)
I-American Economy Ngee-1980
Kutheni Kukho iMimoya?
Iindlela ezi-7 zokwenza iHarloween ephazamisayo nanini
Ogham Iimpawu zeGalari
Indlela Yokusebenzisana Nabantwana Bakho Bantakwethu
Zonke Iifayile zeDive